Fahasamihafana eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Teknolojia / IT / Fandaharana / Fahasamihafana eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary kendrena
Fahasamihafana eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary kendrena
13 Jona 2018 Narotsak'i Lithmee
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary dia ny kisary an- dakilasy maneho ny kilasy sy ny fifandraisan'izy ireo raha ny sary kisary kosa dia maneho ireo zavatra sy ny fifandraisan'izy ireo amin'izy ireo amin'ny fotoana iray manokana.
UML dia mijoro ho an'ny Unified Modelling Language. Manampy amin'ny famolavolana modely miorina amin'ny zavatra hamoronana vahaolana amin'ny lozisialy. Ny kisary UML dia manome tombony maro samihafa toy ny fahatakarana ny fepetra takian'ny orinasa ary hahazoana fahatakarana avo lenta ny fizotran'ny rafitra. Misy karazany roa ny maodely modely UML. Izy ireo dia maodely amin'ny rafitra sy modely amin'ny fitondran-tena. Ny modely voarindra dia mamaritra ny fiasa tsy miova amin'ny rafitra. Etsy ankilany, ny famolavolana modely dia mamaritra ny toetra mampiavaka ny rafitra. Ny kisary sy ny kisary an-tsary dia ny sary UML.
2. Inona no atao hoe kisary
3. Inona ny object diagram
4. Fampitahana mifanila - Sarin-tsarimihetsika vs kisary an-tsary amin'ny endrika tabular
Inona ny kisary kilasy?
Ny kisary an-dakilasy dia maneho ny fomba fijery mijanona amin'ny rafitra. Izy io dia mamaritra ny toetra sy ny fiasan'ny kilasy. Ny kisary an-dakilasy no kisarisary maodely be mpampiasa indrindra ho an'ny rafitra mifantoka amin'ny zavatra satria afaka alefa an-tsarintany mivantana amin'ny fiteny mifantoka amin'ny zavatra izy ireo.
Sary 01: Kisary amin'ny kilasy
Etsy ambony dia ohatra tsotra amin'ny kisary an-dakilasy. Rafitra famandrihana an-tserasera izy io. Ny mpampiasa, ny mpanjifa, ny Administrator, ny Order, ny OrderDetails dia kilasy. Ny kilasy tsirairay dia misy toetra sy fomba. Ny toetra dia mamaritra ny fananana raha ny fomba kosa mamaritra ny fihetsika na ny fiasa.
Ao amin'ny kisary an-dakilasy dia misy mahitsizoro maneho ny kilasy. Mbola mizara telo indray izy io. Ny fizarana ambony dia ny manoratra ny anaran'ny kilasy. Ny fizarana afovoany dia natao ho an'ny toetra, ary ny fizarana farany kosa ho an'ny fomba. Ny kilasin'ny mpanjifa dia manana toetra toy ny anarana, adiresy, mailaka, customerId, accountBalance ary fomba toy ny fisoratana anarana, fidirana ary fividianana.
Toetra sy fomba
Ireo toetra sy fomba dia manana marika hanondroana ny fahitana. Ny - misolo tena manokana. Ireo kilasy hafa dia tsy afaka miditra amin'ireo mpikambana tsy miankina. Io kilasy manokana io ihany no hitan'izy ireo. Ny + dia maneho ny sarambabem-bahoaka sy ny kilasy hafa afaka miditra amin'ireo mpikambana ireo. Matetika, ny toetran'ny kilasy dia manokana, ary ampahibemaso ny fomba. Misy fahitana hafa koa. Antsoina hoe voaaro izy io, ary marika # no misolo tena azy. Ireo kilasy sy kilasy kilasy ihany no afaka miditra amin'ireo mpikambana voaaro.
Ny mpampiasa dia endrika ankapobeny an'ny Administrator sy ny mpanjifa. Ireo kilasy roa ireo dia afaka manana ny toetrany sy ny fomba ampiasain'ny kilasin'ny mpampiasa ary koa ny toetrany sy ny fombany. Ny kilasin'ny mpampiasa dia ny kilasy ho an'ny ray aman-dreny raha ny kilasin'ny Mpanjifa sy ny Administratera kosa ny kilasin'ny zaza. Io hevitra io dia antsoina hoe Generalization.
Ny mpanjifa sy ny filaharana dia manana ny fifandraisan'ny firafitra. Tsy misy ny kilasy Order raha tsy misy ny kilasin'ny mpanjifa. Ny Order sy ny OrderDetails dia manana ny fifandraisan'ny firafitra. Noho izany dia tsy misy ny kilasy OrderDetails raha tsy misy ny kilasin'ny Order.
Ny kisary an-dakilasy dia maneho koa ny multiplicity. Rehefa miresaka momba ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny filaminana, ny mpanjifa dia afaka manana kaody aotra na maromaro. Etsy ankilany, ny baiko dia an'ny mpanjifa iray ihany. Ny filaminana sy ny OrderDetails dia misy fifandraisana 1 hatramin'ny 1. Ny Order dia tsy afaka manana OrderDetails iray monja. Ireo no sasany amin'ny fototry ny kisary kilasy.
Inona ny object diagram?
Ny kisary firafitra iray hafa dia ny kisary an-tsary. Mitovy amin'ny kisary an-dakilasy izy io, nefa mifantoka amin'ny zavatra. Ny foto-kevitra fototry ny kisary zavatra dia mitovy amin'ny kisary kilasy. Ireo kisary ireo dia manampy amin'ny fahatakarana ny fitondran-tena sy ny fifandraisany amin'ny fotoana iray.
Sary 02: Kisary momba ny zavatra
Ny s1, s2, ary ny s3 dia zavatra ampianarin'ny mpianatra ary misoratra anarana amin'ny zavatra c1 izy ireo. Ny zavatra mpampianatra l1 dia mampianatra ny fampianarana c1. Ny mpampianatra zavatra l2 dia mampianatra ny taranja manokana c2. Ny mpianatra s3 dia misoratra anarana amin'ny fampianarana c1 ary koa c2 course manokana. Ity kisary ity dia maneho ny fomba ifandraisan'ny andiana zavatra maromaro. Amin'ny ankapobeny, ny kisary an-tsary dia maneho ny fijerin'ny rafitra iray fa indrindra, maneho ny fomba fijery tsy miovaova ny rafitra amin'ny fotoana iray izy.
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary?
Ny kisary an-dakilasy dia karazana kisarisary firafitra miorina izay mamaritra ny firafitry ny rafitra amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo kilasy, ny toetrany, ny fomba ary ny fifandraisana misy eo amin'ireo kilasy. Ny kisary an-tsary dia karazana diagram static static izay mampiseho fijery feno na ampahany amin'ny firafitry ny rafitra maodely amin'ny fotoana manokana.
Ankoatr'izay, ny kisary an-dakilasy dia mamaritra ny kilasy ary mampiseho ny fifandraisan'izy ireo. Mampiseho ireo zavatra sy ny fifandraisan'izy ireo ny sary kisary. Ny kilasy dia ireo drafitra ary ny zavatra no ohatr'ireo kilasy. Io no mahasamihafa indrindra ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary.
Ankoatr'izay, amin'ny kisary an-dakilasy, ny anaran'ny kilasy dia manomboka amin'ny sora-baventy. oh: Mpianatra. Ao amin'ny kisarisary zavatra iray, ny anaran'ny zavatra dia amin'ny sora-baventy, ary nasiana tsipika. oh, s1: Mpianatra
Famintinana - Kisary kilasy vs kisary kisary
Ny sarin-tsarimihetsika sy kilasy na sary dia maneho ny fiovan'ny rafitra iray. Ny maha samy hafa ny kisary kilasy sy ny kisary an-tsary dia ny kisary an-dakilasy dia maneho ny kilasy sy ny fifandraisany eo amin'izy ireo ary ny kisary an-tsary dia maneho ireo zavatra sy ny fifandraisan'izy ireo amin'izy ireo amin'ny fotoana iray manokana. Ireo kisary ireo dia manampy amin'ny fahazoana ny haavon'ny rafitra.
1. “Unified Modelling Languages ​​(UML) | Kisary momba ny zavatra. ” GeeksforGeeks, 13 feb 2018. Hita eto
2.Tutorials Point. “UML - Tabilao an-dakilasy.” Tutorials Point , 8 Janoary 2018. Hita eto
3.Tutorials Point. “UML - Tabilao misy.” Tutorials Point , 8 Janoary 2018. Hita eto
Fahasamihafana eo amin'ny fanatanterahana sy ny fitsapana ny entana Fahasamihafana eo amin'ny Visual Basic sy Visual Basic.Net (VB6 sy VB.net) Fahasamihafana eo amin'ny EJB2 sy EJB3 Fahasamihafana eo amin'ny Java5 sy Java6 Fahasamihafana eo amin'ny Netbeans sy Eclipse
Fahasamihafana eo amin'ny axial sy appendicular
Fahasamihafana eo amin'ny vatokely sy ny vato voa
Fahasamihafana eo amin'ny marketing sy ny varotra
Fahasamihafana eo amin'ny Trichome sy ny filament
Fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny fiaraha-monina